Ho tonga masoivohon’ny famonjena
"Fa Andriamanitra, Izay nandidy hoe: Aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina, no nampahazava ny fonay ho amin 'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr’Andriamanitra eo amin'ny tavan’i Jesôsy Kristy." - 2 Kor. 4:6.
Tokony ho tena solontenan'i Jesôsy Kristy tokoa ny Kristianina, fa tsy ho mpitonon-tena ho Kristianina fotsiny. Moa hamolavola fijery momba an'Andriamanitra avy amin'ny fampianaran'ny olona izay manonona fotsiny ny anaran'i Kristy nefa tsy manao ny asany ve izao tontolo izao? Moa izy ireo tsy hanondro molotra ireo milaza ny tenany ho mpino, kanefa tsy mpino amin'ny fo, dia ireo izay mamadika ny fahamarinana masina sy manao ny asan'ny fahavalo? Moa hiteny izy ireo hoe: "Kristianina ireo, kanefa mamitaka sy mandainga ka tsy azo itokiana"? Tsy ny olona tondroi-molotra tahaka izany no tena solontenan'Andriamanitra.
Kanefa tsy havelan'Andriamanitra ho voafitaka mandrakizay izao tontolo izao. Manana vahoaka manokana eto an-tany ny Tompo, ary tsy menatra ny hiantso azy ireo hoe rahalahy Izy, satria manao ny asan'i Kristy ireo. Asehony miharihary amin'ny alalan'ny fitandremany ny didiny fa tia an'Andriamanitra izy ireo. Mitondra ny endrik'Andriamanitra izy ireo. Fampisehoana an'Andriamanitra eo anatrehan'izao tontolo izao sy eo anatrehan'ny anjely ary eo anatrehan'ny olona izy ireo. Miara-miasa amin'ireo saina any an-danitra izy ireo, ary dia omem-boninahitra sy ankalazaina Izy amin'ireo izay manao ny asa tsara indrindra.
Miseho miharihary amin'ny alalan'ny asa tsara ary ny asa tsara ihany ny tena fivavahan'ny fo marina, ka rehefa hitan'ny olona ny asa tsara izay ataon'ireo izay tia an'Andriamanitra, dia ho voatarika hanome voninahitra an'Andriamanitra noho izany izy ireo. Feno asa tsara ny fiainan'ny tena Kristianina marina; mitondra vokatra betsaka izy. Mamahana ny noana izy, mampitafy ny mitanjaka, mamangy ny marary, ary mampahery ny ory. Ny Kristianina dia manana fifantohana lalina amin'ireo ankizy manodidina azy, izay eo an-dalam-pahaverezana noho ny fakam-panahy misoko mangina afafin'ilay fahavalo (...). Manana adidy amin'ireo tanora maro manodidina antsika ny fiangonana, satria maty ho azy ireo teo amin'ny hazo fijalian'i Kalvary i Kristy mba hividy ny fanomezan'ny famonjena ho azy ireo. Sarobidy eo imason'Andriamanitra izy ireo, ary maniry ny hananan'izy ireo fifaliana mandrakizay Izy.
Tsy tanteraka ny asam-panavotan'i Kristy raha tsy rehefa manao ny anjarany ny mambran'ny fiangonana, mitsangana sy mihamazava satria tonga ny fahazavan'izy ireo, ary ny voninahitr'i Jehôvah efa miposaka amin'izy ireo. Mangataka fiaraha-miasa tsy an-tery avy amin'ireo masoivohony i Kristy amin'ny fanaovana asa matotra sy mitovy ho famonjem-panahy. — RH, 29 Jan. 1895.